कालिकोटको ‘बान्जाडा’ सबैभन्दा बढी खानेपानी अभाव क्षेत्र - Wash Khabar
कालिकोटको ‘बान्जाडा’ सबैभन्दा बढी खानेपानी अभाव क्षेत्र
३० चैत्र २०७५, शनिबार ०७:३३ 279 पटक हेरिएको
कालिकोट : कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाको बान्जाडा कालिकोटकै सबैभन्दा बढी खानेपानी अभाव क्षेत्र भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । वाटर एडले गरेको सहभागितामुलक कार्य अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको हो । वाटर एडले पलाँता ९ थिर्पुमा गाउँपालिका स्तरीय सहभागितामूलक कार्य अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानमूलक कार्यमा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्षले सहभागिता जनाएका थिए । अनुसन्धानमूलक कार्यबाट अन्य वडा भन्दा वडा नं. २ बढी खानेपानी अभाव देखिएको हो । बान्जाडाका १ सय ८२ घरधुरीका लागि गाउँमा एउटा मात्र खानेपानी धारा रहेको सहभागितामूलक कार्य अनुसन्धानमा सहभागी सनोज तुलाचनले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले वडा नं. २ का लागि २३ किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी ल्याउने कार्य भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम पलाँता कान्छाले बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष बमका अनुसार त्यहाँको खानेपानी आयोजनाका लागि गाउँपालिकाले १० करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
अनुसन्धानमूलक कार्यमा गोपाल तामाङ्ग, महन्तबाबु मर्हजन, साल्पा श्रेष्ठ र सुप्रिया राना सहभागी हुनुभएको थियो ।